Horudhac: Real Madrid vs Elche… (Labadan naadi oo is arkay markii labaad muddo afar maalmood ah & Benzema iyo Courtois oo…) – Gool FM
(Madrid) 23 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dooneysa inay sii dheerreysato hoggaankeeda horyaalka La Liga iyadoo maqribnimada maanta la balansan naadiga Elche oo ay Khamiistii ka reebtay tartanka Copa del Rey ciyaar loo baahday waqti dheeri ah.
Los Blancos ayaa haatan hoggaanka horyaalka dalka Spain ku heysa 49 dhibcood iyadaana ah kooxda ugu cad cad ee gacanta ku dhigi karta horyaalka xilli ciyaareedkan, dhinaca kale, Elche ayaa ku jirta kaalinta 15-aad ee horyaalka iyadoo leh 22 dhibcood.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 06:15 Maqribnimo xilliga Geeska Afrika.
Garoonka: Estadio Santiago Bernabeu
Garsooraha: Ricardo De Burgos (Spain)
Real Madrid ayaa mar kale weyneysa adeegga Dani Carvajal oo kasoo kabanaya Koofid-19 halka Marco Asensio, Jesus Vallejo iyo Mariano Diaz ay dhaawacyo ku seegayaan, balse Karim Benzema iyo Thibaut Courtois kusoo laabtay safka Macallin Carlo Ancelotti kaddib markii ay seegeen kulankii Copa del Rey.
Geesta kale, Elche ayaa dhaawacyo ku weyneysa Pedro Bigas iyo Ivan Marcone, hase ahaatee, waxaa usoo laabanaya Kiko Casilla, Pablo Piatti iyo Javier Pastore, kuwaasoo kasoo kabsaday Korona Fayras.
Real Madrid ayaa guulddarro la’aan ah 11-kii kulan ee ugu dambeysay La Liga oo ay wajahday Elche iyadoo ka heysata rikoor 10 guul iyo hal barbarro ah, waxaana xusid mudan in ugu yaraan labo gool ay dhalisay Madrid sagaal ka mid ah 11-kaas kulan.
Los Blancos weeraryahankeeda Karim Benzema ayaa ugu yaraan hal gool ku lug yeeshay mid kasta oo ka mid ah labadii ciyaarood ee ugu dambeysay La Liga oo garoonka kooxdiisa uu kaga hor tagay naadiga Elche.
Horudhac: Crystal Palace vs Liverpool... (Rikoor waalli ah oo uu Jurgen Klopp ka heysto naadiga Palace oo taariikh u noqday horyaalka Premier League)